शीर्षक यो लेख “2015 वर्ष धारण प्रविधी हुनेछ छाला अन्तर्गत हुन्छ” चार्ल्स आर्थर द्वारा लेखिएको थियो, मंगलवार 9th डिसेम्बर मा दर्शक लागि 2014 10.00 UTC
तपाईं एक गर्मी दिन मा थियो गर्नुभएको धेरै पराबैंगनी जोखिम कसरी जान्न चाहनुहुन्छ? आउने साल, एक बाल स्लाइड तपाईं बताउन सक्छ.
आफ्नो मनको विद्युत गतिविधि निगरानी गर्न आवश्यक छ? हेडफोन एक जोडी त्यसो र आफ्नो स्मार्टफोन गर्न डाटा खुवाउन सक्छ.
दुवै बस कुना को आसपास हो. गत वर्ष या त को लागि, "धारण" प्रविधिको मुख्य आवेदन धेरै सरल कार्यहरू लागि भएको छ - तपाईं लिनुभएको छ कति कदम नाप्ने, तपाईं यसो खपत कति धेरै क्यालोरी अनुमान, र आफ्नो हृदय दर नाप्ने तपाईं त जस्तै. तर 2015, हामी विगतमा सार्दा गरिने, विशेषज्ञ भन्न, शुरू बारेमा उत्पादनहरु को एक panoply संग. स्याउ हेरेको, बिक्री वसन्त मा जाने अपेक्षा, उत्सुक प्रविधि र फिटनेस प्रयोगकर्ता परे पहिरनयोग्य विचार हुनेछ, सामान्य सार्वजनिक गर्न. "यो शायद हालसम्म केहि भन्दा बढी तेज प्राप्त हुनेछ, बस यो एप्पल किनभने,"रूथ थमसन भन्छन्, क्याम्ब्रिज परामर्शदाता मा उपभोक्ता उत्पादन विकास को लागि अभियान व्यवस्थापक, जसले पहिरनयोग्यहरू ठाउँ उत्सुकतासाथ निम्न गरिएको छ. "तिनीहरूले कुराहरू किन्न मान्छे रही यस जादू विधि छ जस्तो देखिन्छ।"
तापनि यसको पूर्ण क्षमता अझै ज्ञात छैन, हेर्ने पहिले नै घोषणा भएर बस प्रचार को टन समाते छ - सैमसंग सहित कम्पनीहरु यो वर्ष पहिले घोषणा अन्य smartwatches eclipsing, एलजी र मोटोरोला. "त्यहाँ एक मुख्यधारा smartwatch छैन,"थमसन भन्छन्. तर त्यो देख्नुहुन्छ सरल गणना परे विस्तार गर्न पहिरनमिल्ने लागि सम्भावित - कदम, क्यालोरी - साँच्चै जडान कुरा मा.
यूवी बाल स्लाइड एक विचार क्याम्ब्रिज परामर्शदाता मा काम गरिरहेको छ छ; अर्को नै साथ संचार प्रविधिको साथ सम्मिलित एक सूट छ, त्यसैले प्रत्येक अन्य विभिन्न तत्व "कुरा". "अर्को चरण पहिरनमिल्ने साँच्चै धारण गर्न छ,"थमसन भन्छन्.
Smartwatches, जो (साधारणतया) त्यहाँ चलिरहेको अनुप्रयोगहरू सूचनाहरू प्रदर्शन गर्न आफ्नो फोन जडान, सुरु गर्न Forefront मा भएको संभावना छ. अनुसन्धान कम्पनी Futuresource फेला खरीद चासो भन्दा बढी दोब्बर smartwatches, र त्यहाँ भएको थियो एक 50% मई र अक्टोबर बीच एक फिटनेस ट्रयाकर प्राप्त गर्न इरादा मा वृद्धि 2014; सबै भन्दा ठूलो परिवर्तन आईफोन मालिक बीच थियो, संभवतः एक पटक तिनीहरूले एप्पल सेप्टेम्बर यसको अवलोकन unveil देखे. अर्को विश्लेषण कम्पनी, जुनिपर रिसर्च, यो चार वर्ष हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छ smartwatches बिक्री मात्रा मा फिटनेस trackers लाग्नेछन् अघि, किनभने बस trackers सस्ता छन्.
लागि एउटा मुख्य ध्यान 2015 स्वास्थ्य हुनेछ. माइक्रोसफ्ट पहिले नै बन्द देखाउनुभएको छ यसको ब्यान्ड, एक नारी-माउन्ट फिटनेस र स्वास्थ्य ट्रयाकर (भनेर पनि यूवी जोखिम उपाय). माइक्रोसफ्ट, गुगल र एप्पल आफ्नै "स्वास्थ्य" मञ्चहरूमा शुरू गरेका छन्, हामी गरेका बारेमा डाटा aggregating लागि, वा स्वास्थ्य अवस्था हुन सक्छ जसले मानिसहरूलाई आवश्यक डाटा मापन गर्न. (मेरो आफ्नै जीपी रीतिरिवाजको मा हुक गर्न सक्नुहुन्छ स्याउ गरेको HealthKit आइफोन मा, प्रयोगकर्ता अनुमति दिन्छ भने।) डाक्टर स्वास्थ्य बारे जानकारी दिन झन् पहिरनमिल्ने को प्रयोगका द्वारा रुचि हो. र पनि वित्त संसारमा रुचि छ: क्यानाडा बैंकहरुको लागि सम्भावित देख रहे एक Wristband Bionym भनिने सुरुवातमा गरेको कि भुक्तानी प्रमाणित गर्न आफ्नो ईसीजी ढाँचा अद्वितीय तत्व उपाय.
सबैभन्दा पहिरनमिल्ने अझै "वरिपरि बारी" परीक्षण पास गर्न, Sonny दर्शनों अनुसार, Misfit को संस्थापक, जो शाइन गतिविधि ट्रयाकर बनाउँछ. छ, यदि तपाईं यो बिहान छोडेर चाहन्छु फेला यसलाई प्राप्त गर्न घर जान तपाईं वरिपरि बारी थियो? तर तिनीहरू थप लोकप्रिय रूपमा, र थप लचिलो (संवेदन-बाल स्लाइडहरू यूवी पछि, किन छैन प्रदूषण-संवेदन वस्त्र?), तिनीहरूले आवश्यक बन्न सक्छ.
मात्र फिर्ती को दावा साँच्चै सफल पहिरनमिल्ने हामीलाई जासुसी गर्न प्रयोग गर्न सक्ने हुन सक्छ. कैलगरी मा एक मामला, क्यानाडा, पहिलो हुन सक्छ, जहाँ एक डेटा Fitbit उनको पेशा मा कसैले लागि अपेक्षित थियो भन्दा दुर्घटना भोगे गर्ने फिटनेस प्रशिक्षक कम गतिविधि स्तर भनेर देखाउने प्रयास गर्न प्रयोग भइरहेको छ. मामला अनुपम हुन दावी छ - तर मात्र हालसम्म छ. सायद भविष्यमा, हाम्रो पहिरनमिल्ने हामी साँच्चै हामी हुन दावी रूपमा सक्रिय छन् भने प्रमाणित गर्न प्रयोग गरिनेछ, र साँच्चै चलान गरे (वा हिंड्न) कहाँ र हामी यसो हामी गरे.
← अघिल्लो पोस्ट5लागि eBay अचम्मको आला बजार →